စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်း၊ ကာလာ ပြောင်းလဲလာမှု – DigitalTimes.com.mm
Ko Ko PR Mar 15, 2019
စမတ်ဖုန်းတွေဟာ အရင်က အဖြူ နဲ့ အနက် ကာလာ နှစ်ရောင်နဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ ဒီဇိုင်း၊ ကာလာတွေနဲ့ပဲ ထွက်လေ့ရှိတာ ကနေ နောက်ပိုင်းမှာ သုံးစွဲသူတွေ အတွက် ထူးခြားတဲ့ ကာလာနဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ပြောင်းလဲပြီး ထုတ်လုပ်လာကြပါတယ်။ ဒီလို ထုတ်လုပ်လာကြတဲ့ စမတ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာမှ OPPO ဟာ စမတ်ဖုန်း ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ ဦးဆောင်သူ အဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး ကာလာ နှစ်ရောင်စပ် သုံးရောင်စပ် ဖုန်းတွေကို ထုတ်လုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
OPPO က 2018 မှာ R15 Nebula Special Edition နဲ့ Gradient Color Trend (ရောင်ပြေးကာလာ ခေတ်ရေစီးကြောင်း)ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ F9 ကနေ စတင်ပြီး gradient color (ရောင်ပြေးကာလာ) နဲ့ ဈေးကွက်မှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ OPPO F9 အနေနဲ့ ရောင်ပြေးကာလာဒီဇိုင်း ဖက်ရှင်ရှေ့ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် အခု ထပ်မံ ထွက်ရှိလာမယ့် F11 စီးရီးကတော့ ရောင်ပြေးကာလာဒီဇိုင်းရဲ့ ပြေပြစ်ကြော့ရှင်းမှုနဲ့ ထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့ သဘာဝအလှတရားတို့ကို ရောစပ်ထားတဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းသစ် အနေနဲ့ ထွက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
“သဘာဝတရားမှဖန်တီးမှု” ဆိုတဲ့ အနုပညာဆန်တဲ့စိတ်ကူးကို အခြေခံပြီး OPPO ဟာ F11 Pro ရဲ့ အရောင်ကာလာ စီးဆင်းမှုအတွက် ဟန်ချက်ညီတဲ့ အလှတရားကို သဘာဝအလင်းရောင်ရဲ့ အလှတရားကနေပြီး စိတ်ကူးဖန်တီးထားခဲ့တာပါ။ OPPO ဟာ ညဘက် ကောင်းကင်ယံမှာ တွေ့ရတဲ့ ဥက္ကာကြယ်တွေလို အနီ နဲ့ အပြာ ကွက်ကျားရောစပ်ပြီး F11 Pro စမတ်ဖုန်းကိုယ်ထည်ရဲ့ နက်နဲသိမ်မွေ့တဲ့ မဟူရာအရောင်ပေါ်မှာ Thunder Blackဆိုတဲ့ သုံးရောင်စပ် ရောင်ပြေးကာလာ ကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
The Northern Lights dance over Roche Bonhomme, Old Man Mountain in Jasper, Alberta. The Aurora Borealis reflects it’s colour in the moving water of the Athabasca River.
OPPO ဟာ အပြာ နဲ့ အစိမ်း ရောင်ပြေးလိုင်းများနဲ့ ထူးခြားသော Aurora Green ကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ Thunder Black နဲ့ Aurora Green ဆိုတဲ့ အရောင်နှစ်ရောင်ဟာ ညဘက် မိုးချိန်းရင် မြင်တွေ့ရတဲ့ လျှပ်စီးရဲ့ အရောင်နဲ့ အရုဏ်ဦး အရောင်တို့ကနေ အခြေခံထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန်းပြားလှပတဲ့ ဒီဇိုင်း၊ ကာလာတွေနဲ့ ထွက်လာမယ့် F11 Pro ဟာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို မကြာမီ ရောက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပြီး အခြား ဘယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်တွေပါလာဦးမလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
OPPO F11 Pro အကြောင်း ထပ်မံသိရှိလိုပါက အောက်ကလင့်မှာ ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
စမတျဖုနျးတှဟော အရငျက အဖွူ နဲ့ အနကျ ကာလာ နှဈရောငျနဲ့ ရိုးရှငျးတဲ့ ဒီဇိုငျး၊ ကာလာတှနေဲ့ပဲ ထှကျလရှေိ့တာ ကနေ နောကျပိုငျးမှာ သုံးစှဲသူတှေ အတှကျ ထူးခွားတဲ့ ကာလာနဲ့ ဒီဇိုငျးတှကေို ပွောငျးလဲပွီး ထုတျလုပျလာကွပါတယျ။ ဒီလို ထုတျလုပျလာကွတဲ့ စမတျဖုနျး ကုမ်ပဏီတှထေဲမှာမှ OPPO ဟာ စမတျဖုနျး ဒီဇိုငျးပိုငျးမှာ ဦးဆောငျသူ အဖွဈ ရပျတညျနပွေီး ကာလာ နှဈရောငျစပျ သုံးရောငျစပျ ဖုနျးတှကေို ထုတျလုပျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
OPPO က 2018 မှာ R15 Nebula Special Edition နဲ့ Gradient Color Trend (ရောငျပွေးကာလာ ခတျေရစေီးကွောငျး)ကို စတငျခဲ့ပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ F9 ကနေ စတငျပွီး gradient color (ရောငျပွေးကာလာ) နဲ့ ဈေးကှကျမှာ အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ OPPO F9 အနနေဲ့ ရောငျပွေးကာလာဒီဇိုငျး ဖကျရှငျရှဆေ့ောငျဖွဈခဲ့ပွီးနောကျ အခု ထပျမံ ထှကျရှိလာမယျ့ F11 စီးရီးကတော့ ရောငျပွေးကာလာဒီဇိုငျးရဲ့ ပွပွေဈကွော့ရှငျးမှုနဲ့ ထငျရှားပျေါလှငျတဲ့ သဘာဝအလှတရားတို့ကို ရောစပျထားတဲ့ ဖကျရှငျဒီဇိုငျးသဈ အနနေဲ့ ထှကျရှိလာတာပဲဖွဈပါတယျ။
“သဘာဝတရားမှဖနျတီးမှု” ဆိုတဲ့ အနုပညာဆနျတဲ့စိတျကူးကို အခွခေံပွီး OPPO ဟာ F11 Pro ရဲ့ အရောငျကာလာ စီးဆငျးမှုအတှကျ ဟနျခကျြညီတဲ့ အလှတရားကို သဘာဝအလငျးရောငျရဲ့ အလှတရားကနပွေီး စိတျကူးဖနျတီးထားခဲ့တာပါ။ OPPO ဟာ ညဘကျ ကောငျးကငျယံမှာ တှရေ့တဲ့ ဥက်ကာကွယျတှလေို အနီ နဲ့ အပွာ ကှကျကြားရောစပျပွီး F11 Pro စမတျဖုနျးကိုယျထညျရဲ့ နကျနဲသိမျမှတေဲ့ မဟူရာအရောငျပျေါမှာ Thunder Blackဆိုတဲ့ သုံးရောငျစပျ ရောငျပွေးကာလာ ကို ဖနျတီးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
OPPO ဟာ အပွာ နဲ့ အစိမျး ရောငျပွေးလိုငျးမြားနဲ့ ထူးခွားသော Aurora Green ကို ဖနျတီးခဲ့ပါတယျ။ Thunder Black နဲ့ Aurora Green ဆိုတဲ့ အရောငျနှဈရောငျဟာ ညဘကျ မိုးခြိနျးရငျ မွငျတှရေ့တဲ့ လြှပျစီးရဲ့ အရောငျနဲ့ အရုဏျဦး အရောငျတို့ကနေ အခွခေံထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဆနျးပွားလှပတဲ့ ဒီဇိုငျး၊ ကာလာတှနေဲ့ ထှကျလာမယျ့ F11 Pro ဟာတော့ မွနျမာနိုငျငံကို မကွာမီ ရောကျရှိလာတော့မှာ ဖွဈပွီး အခွား ဘယျစိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ အခကျြတှပေါလာဦးမလဲ ဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျနျော။
OPPO F11 Pro အကွောငျး ထပျမံသိရှိလိုပါက အောကျကလငျ့မှာ ဝငျရောကျ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။